Ebee ka ịchọta echiche maka Gartic Phone - Ebe kachasị mma nke 2021 ❤️ GOLUEGO.COM
Ebe ịchọta echiche maka Gartic Phone - Ebe kachasị mma na 2021
emelitere ikpeazụ Mar 15, 2021
Ọ bụrụ na ị na-achọ mmanya nke echiche maka Gartic Phone, egwuregwu dị n'etiti ndị kachasị egwu ugbu a, mgbe ahụ ọ ga-eju gị anya ịmara na ị nwere ike ịchọta ha n'ọtụtụ ebe na-enweghị ngwụcha na n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche.
Gartic Phone bụ ihe ọzọ nke egwuregwu na-awụlikwa elu ka ụwa a ma ama ekele youtubers na-eso ha videos mgbe egwu na-egwu. Nke a, ọ kachasị, bụ egwuregwu na-agwakọta ihe bụ isi nke dixit, ekwentị agbajiri agbaji na iwebata iji wetara anyị atụmatụ ọhụụ nke anyị ga-eji nwee anụrị ọtụtụ awa.
Echiche maka Gartic Phone: nke kachasị mma nke 2021
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịdị ka egwuregwu nke dabara na onyinye ya, eziokwu bụ na enwere echiche maka Gartic Phone i nwere ike ime imerime crazy ihe ka mma gị gaminggba Cha Cha ahụmahụ na-enwe ezigbo ọchị.
Ihe kachasị mma bụ na ịnwere ike ịnụ ụtọ ya na ndị enyi gị na ndị ọbịa.
Iji chọta echiche kachasị mma maka Gartic Phone, anyị na-akwado ka ị lelee ndị isi egwuregwu ahụ, dịka Auronplay, ma ọ bụ ka ị gaa na Discord ụlọ ndị edoziri maka naanị Gartic Phone. I nwekwara ike chọọ na ibe dị ka Reddit, ebe enwererịrị nnukwu obodo.
Anyị na-adụ gị ọdụ ka ị mepụta ahịrịokwu na-enweghị isi, see ihe na-enweghị ihe jikọrọ ya na ya, ma ọ bụ dee abụ dị iche. Nwedịrị ike ide okwu mgbasa ozi na-eme ka ị chịa ọchị karịa mgbe ọ bụla.
Mb10.com brawl stars
Egwuregwu Gartic Phone na gam akporo na iOS
Etu esi akpọ ndi enyi Gartic Phone